नर्सका समस्या समाधानका लागि निरन्तर संघर्षमा छौं हामी
माघ १५, २०७३ शनिवार २३:४९:००
नर्सिङ क्षेत्रतिरको आकर्षण घटेको छैन । विगत केही वर्षदेखि भने नर्सिङमा रोजगारीको सन्तुलन बिग्रेको छ । बर्सेनी नर्सहरू बढिरहेका छौं । तर, त्यसअनुसार अवसरहरू भने सिर्जना हुन सकेका छैनन् । अस्पतालहरूलाई नयाँ नर्सलाई जागिर दिनुपर्ने बाध्यता नहुनु धेरै नर्स बेरोजगार...
नर्सिङ काउन्सिलको रेकर्डमा छन् ६७ हजार ८२ नर्स
माघ १५, २०७३ शनिवार २२:२७:००
अस्पतालमा नर्स अनिवार्य भए पनि उनीहरूको संख्यामा सरकारले नै ध्यान दिन सकेको छैन । अस्पताल र अस्पतालले दिने सेवा वृद्धि भइरहेका छन्, बिरामीको चाप बढ्दो छ तर त्यसअनुसार नर्स बढाउने काम हुन सकेको छैन । नेपालको कुल जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने हाल सरकारी सेवामा कार्यर...
माघ १५, २०७३ शनिवार १८:२६:२७
नर्सिङ करिअरका क्रममा हामीले धेरै बिरामीसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीका बारेमा जतिसुकै हामीले बुझे वा बुझ्ने प्रयत्न गरे पनि ड्युटीको क्रममा कतिपय बिरामीको कारण नर्सलाई असह्य हुन्छ । तर जस्ता सुकै चुनौती भए पनि हाम्रो व्याबसायिक धर्मलाई बिर्सनु हुन्न । हामी जहिले पनि ...
‘मिस नर्स’ रोक्ने नर्सिङ शक्ति विकृतीविरुद्ध किन नलगाउने ?
माघ १५, २०७३ शनिवार १७:२८:००
विगत तीन वर्षदेखि हुँदै आइरहेको 'मिस नर्स नेपाल' यस पटक नहुने भएछ । समाजसेवी पेसालाई सौन्दर्यसँग जोडिएको भन्दै यसको चर्को विरोधपछि आयोजकले मिस नर्स नेपालको नाम फेरेर अर्कै नाममा गर्न लागेछन् । नर्सिङ पेसा समाजसेवी पेसा हो यसमा कुनै दुई मत छैन । मिस नर्स नेपाल कार्य...
नेपालमै काम गरिरहेका पुरुष नर्स
माघ १५, २०७३ शनिवार १५:४८:००
वीर अस्पतालका स्व. डा. भरत थापा एकपटक काम विशेषले काठमाडौंबाहिर गएका थिए । घर फर्किएपछि श्रीमतीसंग कुरैकुरामा भनेछन्, ‘म त नर्ससंग सुतेर आएँ’ । त्यसपछि श्रीमतीले ¥याख¥याख्ति पार्दै सोधखोज गर्न थालिन् । थापाले महिला होइन पुरुष नर्स हो भनेर सम्झाए । त्यतिले पनि श्र...
कुपोषणको डरलाग्दो चित्र
माघ १२, २०७३ बुधवार १८:१९:१७
बालबालिका र शिशु कुपोषणग्रस्त रहेका समाचार अचेल सञ्चार माध्यममा निकै आउन थालेका छन् । धेरै आमाले गर्भवती अवस्थामा पौष्टिक आहार खान नपाउँदा र सुत्केरीपछि प्रसस्त मात्रामा दूध नआउँदा शिशुहरु कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् । शिशु र बालबालिका कुपोषित नहुन् भनेर विभिन्न कार्यक्...
नहुने भयो मिस नर्स
माघ १२, २०७३ बुधवार १७:५७:२८
काठमाडौ– ‘मिस नर्स नेपाल’ यसपल्टबाट नहुने भएको छ । तेस्रो संस्करणमा आइपुग्दा नर्सले चर्काे विरोध गरेपछि आयोजक संस्था पछि हटेको हो । नर्सहरुले समाजसेवी पेशालाई सौन्दर्यसँग जोडेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उक्त सौन्दर्य प्रतियोगीता यस...
पुस १०, २०७३ आइतवार २२:०३:००
नेपालको नर्सिङ क्षेत्रका समस्या उधिन्ने अनगिन्ति भेटिन्छन् । पाइलैपिच्छे समस्याको थाक पन्छाएर हिँड्नुपर्छ भन्दा फरक पर्दैैन । समस्याहरु मध्ये अहिले नेपालको नर्सिङ क्षेत्र ६ वटा समस्या टड्कारो रुपमा देखिएका छन् । १ नर्सिङमा ब्रेन ड्रेन सन्तान विदेश नगए बाबुआमालाई ...
नर्सलाई एक्सपोजर भिजिट आवश्यक
मंसिर २६, २०७३ आइतवार १९:१५:००
हामी नर्सहरु बिरामीको सेवा त गरिरहेका हुन्छौं। तर बिरामीका आफन्तले हामीलाई खासै महत्त्व दिदैनन्। बिरामी निको पार्न नर्सको भुमिका नै नभएको जस्तो व्यवहार हामी माथी हुन्छ । बिरामीको सेवामा चौबीसै घन्टा खट्ने भनेको नर्स नै हो । तर उनीहरुलाई पर्दा पछाडी पारिएको छ । ...
बाल मस्तिष्क पक्षघात के हो ?
मंसिर २४, २०७३ शुक्रवार १६:०४:००
बाल मस्तिष्क पक्षघात एउटा यस्तो अवस्था हो, जसले सामान्य हुनुपर्ने शरिरको विभिन्न भागको चालमा असर पारेको हुन्छ अर्थात् यो एउटा बच्चाहरुको शारिरिक अशक्तता हो । यसले गर्दा बालमस्तिष्क पक्षघातबाट पिडित बालबालीका र परिवारमा शारिरिक, मानसिक र सामाजिक असर परिरहेको हुन्छ । बालम...
नर्सिङको महत्व कहिले बुझ्ने ?
मंसिर १८, २०७३ शनिवार २२:४१:००
नर्स एक सहनशिल, कर्तब्यनिष्ठ, शैक्षिक रुपमा योग्य र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एउटा जिम्मेवार र उत्तरदायी व्यक्ति हो । जुनसुकै तहको स्वास्थ्य संस्था भएपनि नर्स बिना पूर्ण हुन सक्दैन । तर पनि यो पेशा सम्मानजनक पेशाको रुपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन कि भन्ने भान हुन्छ्र नर्सहरुलाई । ...
कात्तिक २१, २०७३ आइतवार २३:४६:००
काठमाडौं– काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले सरकारसँग १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च मागेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरैले उनको आलोचना गरेका छन् । उनको उपचारमा १ करोड खर्च नहुने चिकित्सकहरुले नै बताएका छन् । यसैगरी उनलाई लागेको ब्रेष्ट क्यान्सरको नेपालमै उपच...
छोरी जन्माएको भन्दै अस्पतालमै सुत्केरी छाडेपछि…
कात्तिक १८, २०७३ बिहिवार १७:०९:००
सानैदेखि बिरामीको सेवा गर्ने चाहना थियो । यसैले एसएलसीको पढाई सकिएलगत्तै अनमी पढेँ । पढाई सकेपछि म कामको सिलसिलामा केही अस्पतालमा पुगेँ । तर जागिर कतै पाउन सकिनँ । कतै भोलुन्टर त कतै अन्य नाममा निःशुल्क काम गर्न बाध्य भएँ । अनमीमा जागिरको अवसर रहेनछ भनेर मैले ...
Nurses Most Trusted Professionals
कात्तिक ९, २०७३ बुधवार ०१:२८:००
According to the survey, 80% of respondents rated nurses as having very high “honesty and ethical standards.” About 65% saying the same for medical doctors and pharmacists. All three medical professions rated slightly lower than they had in...
कात्तिक ८, २०७३ मगलवार ००:१३:००
तराई, पहाड र हिमालको सुन्दर देश नेपालमा अझै पनि मातृ शिशुदर अन्य विकशित मुलुकमा जस्तो कम भइसकेको छैन। घरधन्दा अनि उकाली ओराली अनि मेलापात गर्ने नेपाली महिलाको दैनिकी अझै सहज हुन सकेको छैन। महिलाको पोषणमा कमि अनि, गर्भावस्थामा पनि जटिल कार्यहरुमा...
From unfriendly NICU to friendly NICU
कात्तिक ८, २०७३ मगलवार ००:००:००
Developmental care is the use ofarange of nursing interventions to decrease dystimulations and the stress and to support adequate neurodevelopment and the maturation of sensory-motor processes including orality and feeding of sick newborns....
Registration Process and Opportunity in Australia for Nepalese Nurses
कात्तिक ८, २०७३ सोमवार २३:५५:००
Nursing is one of the most exciting and in-demand professions in the world today. Its demand might be in different scale in the different part of the world, however it is becoming consistently more and more popular year after year. One of the obvious p...
कात्तिक ४, २०७३ बिहिवार १५:०३:००
हामी २१ औ शताब्दीमा आईपुग्यौं । अरु देश विकासको उच्च विन्दुमा पुगिसके । भौतिक अनि मानिसक दुवै रुपमा पनि उनीहरु अघि बढिसकेका छन् । हामी कमजोर छौं हामी अविकसित छौं । भौतिक रुपमा अनि बौद्धिक रुपमा पनि । पढेर मात्रै मान्छे ठूलो हुँदैन आफू बाहेक अरुको पढाई क्षमतालाई...
नर्सप्रति पुरुषको चासो सही, बुझाइ गलत
कात्तिक ३, २०७३ बुधवार १७:४९:००
नर्सिङ पेशाप्रति पुरुषको चासो बढिरहेको देख्दा खुशी लागेको छ । केही दिनदेखि नर्सिङ पेशालाई लिएर पुरुष लेखेकले कलम चलाइरहेको पढिरहेकी छु । यसले मलाई पनि कलम चलाउन उत्साहित बनायो । अनलाइन, पत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा नर्सबारे गरिने चर्चाले यो पेशालाई मर्म...
नर्स भनेको राम्री नै हुनु पर्छ र ?
कात्तिक २, २०७३ मगलवार २१:५३:००
सर्वप्रथम यो प्रतिकृयात्मक टिप्पणी म मेरो पुर्व प्रकाशित “नर्स भनेको राम्री नै हुनु पर्छ !“ भन्नेसँग जोड्न चाहन्छु । बास्तवमा लेखको अभिप्राय जस्तो देखियो त्यस्तो बिल्कुल थिएन । शिर्षकमै प्रश्नवाचक चिन्न हुनुपर्थ्यो र यो शिर्षकले मेरो अन्तिम निष्कर्षलाई छायाँमा पार्ने का...